Ungapaka kuphi i-motorhome nokuthi ungamisa kuphi | Izindaba Zokuhamba
Ungapaka kuphi i-motorhome
Luis Martinez | 20/04/2022 09:00 | Amathiphu, Izindlela zokuphunyuka
Kujwayelekile kakhulu kulabo abathenga imoto enendawo yabagibeli ukubuza lo mbuzo ungapaka kuphi i-motorhome. Ngoba imithethonqubo incike kumasipala ngamunye futhi, izikhathi eziningi, ayicaci kuzo zonke izimo.
Ngaphezu kwalokho, ama-motorhomes athole amandla amakhulu ezikhathini zamuva nje. Kunamakhulu ezinkulungwane zabantu abakhethe ukuthenga eyodwa ukuze bahambe. konke kugqame inkululeko ukuthi uyabanikeza, njengoba bengathatha isifundo abasifunayo futhi bayeke lapho befuna khona. Ngamafuphi, bagqamisa ukuthi kubavumela ukuthi bahlele uhambo lwabo ngendlela abafisa ngayo. Uma ucabanga ukuthenga enye yalezi zimoto, sizokuchazela ukuthi ungayipaka kuphi i-motorhome kanye nezinzuzo ezikunikeza yona.
1 Ungakhempa kuphi futhi ungapaka kuphi i-motorhome?
1.1 Izindawo ezisogwini nezivikelekile
2 Izinzuzo zokuhamba ngemotorhome
3 Ukubi kokuhamba ngemotorhome
Ungakhempa kuphi futhi ungapaka kuphi i-motorhome?
Into yokuqala okufanele sikuchazele yona ngayo umehluko phakathi kokupaka nokukhempa. Futhi ngisho naphakathi kwalo msebenzi wokugcina nokunye okufanayo, kodwa akufani, chitha ubusuku. Njengomthetho ojwayelekile, ungakwazi ukupaka imoto yakho kunoma iyiphi indawo enikwe amandla okupaka. Ngaphandle uma kuvinjelwe ngokusobala, ayiyeki ukuba uhlobo lwemoto futhi, ngakho-ke, inamalungelo kanye nemisebenzi efana nezinye.
Kuyiqiniso ukuthi kunezinhlobo ezahlukene zama-motorhomes. Ungaba nohlobo oluncane lwe-Camper noma olukhulu olufana neloli elincane. Esimweni sokugcina, uzoba nemikhawulo efanayo nezinye izimoto ezinzima. Isibonelo, kukhona amadolobha angabavumeli ukuthi bajikeleze phakathi nendawo noma bapake emigwaqweni yabo. Esimeni esinjalo, ngeke ukwazi ukukwenza ngemotohome yakho futhi.
Kodwa-ke, ukubuyela ohlotsheni lwe-camper noma ezincane, awukwazi ukupaka ezindaweni ezifanayo njengezimoto, kodwa futhi ungachitha ubusuku kuzo. Nokho, kuzodingeka uhloniphe imithetho ethile. Lokhu kuhlanganisa ukungavimbi ukubonakala kwamatshe esikhumbuzo noma ukuhamba kwezinye izimoto nokugwema umsindo. Kunoma yikuphi, okunqatshelwe ukukhempa kulezi zindawo.
Siqonda ngokuchitha ubusuku, njengoba negama lakho liphakamisa, iqiniso lokulala ngaphakathi kwemoto yakho. Uma nje ipakwe kahle, ungakwazi. Futhi unelungelo lokudla wenze neminye imisebenzi kulo. Imoto yakho iyindawo yangasese futhi akekho ongakutshela ukuthi wenzeni ngayo.
Nokho, awukwazi ukukhempa. Lokhu kuqondwa njengeqiniso lokupaka i-motorhome yakho nokususa ama-awnings noma ezinye izakhi zangaphandle. Bekuzokwenza nokuthi ikhiphe imfucuza iphumele ngaphandle. Ungakhempa kuphela izindawo ezivulekele kalula. Ngokunengqondo, izindawo ezizimele, inqobo nje uma ugunyazwe kubanikazi bazo, futhi zikunikeza ithuba lokukhempa.
Izindawo ezisogwini nezivikelekile
Kufanele unakekele ngokukhethekile lapho upaka i-motorhome yakho ogwini noma ezindaweni ezivikelwe ngokukhethekile. Mayelana neyokuqala, khumbula ukuthi i- Umthetho Wasogwini ikwenqabela ngokuqinile ukupaka emabhishi nasezindaweni zawo ezinethonya. Ngokuqondene nemizuzwana, awukwazi ukukwenza nawe, ingasaphathwa eyokulahla uhlobo oluthile lwemfucuza. Izinhlawulo kuzo zombili lezi zimo ziphezulu kakhulu. Isibonelo esihle samasayithi angavunyelwe kungaba Ipaki likazwelonke laseDoana.
Nokho, cishe kuzo zonke izindawo ezivikelwe noma ezisogwini zikhona izindawo zokukhempa lapho ungakwenza futhi nge-motorhome yakho. yizingcingo izindawo zesevisi, ezikuvumela ukuthi ukhiphe udoti emotweni yakho futhi ube nezindlu zangasese, indawo yokudlela nezinye izinsiza. Zingabuye zikhululeke noma zikhokhelwe.
Impela, bayakhokhelwa amakamu, izindawo ezivame ukuba nezindawo zesevisi zama-motorhomes. Bakunikeza konke okudingayo ukuze ujabulele ukuhlala ngokunethezeka futhi akubizi.
Izinzuzo zokuhamba ngemotorhome
Amakharavani endaweni yokukhempa
Njengoba sesike sakutshela, inzuzo enkulu enikezwa yilolu hlobo lwemoto inkululeko. Ungakwazi ukushaya umgwaqo ngokungenanjongo, ushintshe umzila wakho futhi uchithe ubusuku nomaphi lapho ufuna. Uma uhlala ehhotela noma efulethini, uzoba neholide elimnandi edolobheni elithile. Ngakolunye uhlangothi, ngemotorhome ungahamba ngokuzimela usuka endaweni eyodwa uye kwenye futhi unqamula amazwe amaningana. Konke kuncike kumakhilomitha ofuna ukuwenza.
Ungakwazi ngisho nokuhlanganisa ulwandle nezintaba, ukuvakashela ezikhumbuzo neminye imisebenzi ohambweni lwakho. Kodwa uhlale wazi ukuthi unayo indawo yakho yokuhlala noma ngabe ukuphi. Ngaphezu kwalokho, le nkululeko ikuvumela hamba kancane, ukumisa isikhathi esiningi noma esincane ezindaweni ozifunayo, futhi thuthukisa imizila emisha.
Enye inzuzo enkulu yama-motorhomes yilokho unakho konke okudingayo endaweni encane, kodwa ikakhulukazi esetshenziswa. Ngokungafani negumbi lehhotela, imoto yakho inekhishi futhi, kuye ngobukhulu bayo, ezinye izinsiza ezifana negumbi lokuhlala elincane noma imibhede enomatilasi ekhethwe nguwe.
Ngakolunye uhlangothi, ukuhamba njengomndeni ngemotorhome kuyinto enhle kakhulu, ikakhulukazi ezinganeni zakho ezincane. Kubo, kuzoba konke i-adventure ukuhlala endlini encane enamasondo angabuye aguqulwe. Futhi, ngaphezu kwakho konke, bayojabulela ukubonga ukuxhumana nemvelo ukuthi lolu hlobo lohambo lubanika lona. Ngokwesibonelo, zicabange zisukuma zigcwele Iziqhingi zaseYurophu.
Ungakwazi ngisho nokucabangela i-motorhome njenge ukutshalwa kwemali. Kuyiqiniso ukuthi, ekuqaleni, kuzosho ukusetshenziswa kwezimali okukhulu. Kodwa cabanga ngalo lonke uhambo ongaluthatha nokuthi lungabiza malini ukube ulwenza ngezithuthi zomphakathi futhi uhlala emahhotela. Ngokuhamba kwesikhathi, ngokungangabazeki uzogcina imali enhle.
Unayo nokukhethwa kukho kwe ukuqasha imotorhome. Kulokhu, umehluko ubaluleke nakakhulu. Ngokunengqondo, ngayinye inenani layo futhi lokhu kuyahlukahluka kuye ngendawo ohlala kuyo nezinye izici. Kodwa, ngokwesilinganiso, enye yalezi zimoto ingakubiza ama-euro ayikhulu noma ikhulu namashumi amahlanu ngosuku. Cabanga ukuthi, ngalokhu, uqashela umndeni wakho indlu encane kanye nemoto ongayihamba ohambeni lwakho. Manje qhathanisa le ntengo nokuthi kungakubiza malini ukuya emadolobheni ofuna ukuwavakashela futhi uhlale kuwo. Umehluko wemali mkhulu.
Okokugcina, iqiniso lokuhamba ngemotorhome likuvumela ukuthi uthole izindawo zohambo lwakho lapho uziphumulele. Ungakwenza ku izinsuku lapho bengagcwele kakhulu ezokuvakasha. Futhi, ngayo, uzogwema imigqa emide eminyuziyamu, ezindaweni zokudlela, ezikhumbuzo nakwezinye izindawo ezithakazelisayo.
Kodwa-ke, ukuhamba ngemotorhome nakho kunobubi obuthile. Sizokukhombisa ezibaluleke kakhulu ngezansi.
Ukubi kokuhamba ngemotorhome
Inkululeko enikezwa i-motorhome
Njengezinye izinhlobo zohambo, ukukwenza ku-motorhome akujabulisi kuwo wonke umuntu. Kuyiqiniso ukuthi abanye abantu abaye balizama abalifuni iholide elihlukile. Kodwa kuyiqiniso futhi ukuthi abanye abaqedi ukujwayela le ndlela yokuhamba.
Udinga ukunaka umsebenzi onikezwa yilezi zinhlobo zezimoto. Kwesinye isikhathi kufanele uyijike uyilinganise ukuze izinze endaweni yokukhempa. Ngokunjalo, kufanele uyixhume kunethiwekhi kagesi futhi uhlole ukuthi inamanzi okuphuza enele yini. Kufanele ukhiphe ngisho nendle.
Ngakolunye uhlangothi, indawo ekunikeza yona incane kakhulu. Ngakho-ke, kufanele uhleleke kakhulu futhi uhloniphe nalabo abahamba nawe. Isibonelo, uma kunombhede ogoqwayo ophenduka itafula, olele kuwo kuyodingeka avuke ekuseni ukuze abanye badle ukudla kwasekuseni.
Ngokungafani nohambo lwendabuko, ngemotorhome kufanele kwenze konke. Kuzodingeka unakekele ukushayela, ukufakwa nokuhlanza, ukuthenga futhi, ngokuvamile, konke okudingayo ukuze ube nokuhlala okujabulisayo.
Ngaphezu kwalokho, ezimweni eziningi uzodinga imoto yesibili. Izindawo zesevisi zama-motorhomes ngokuvamile zisemaphethelweni amadolobha. Ngakho-ke, ukuze usondele kubo, ungadiliza indawo yakho yokukhempa futhi uyibuyisele lapho ubuya noma usebenzise isithuthuthu noma ibhayisikili ukuhambahamba. Ngakolunye uhlangothi, lezi zinhlobo zezimoto zihamba kancane. Azifinyeleli ngesivinini esikhulu ngakho kuzodingeka uthathe uhambo ngokuzola. Nokho, lokhu kungenye yezintelezi zayo.
Okokugcina, kufanele ukhumbule ukuthi i-motorhome inayo izindleko zesondlo. Sesikushilo ukuthi intengo yayo ayishibhile, kodwa futhi kuyabiza ukuyinakekela. Idla uphethiloli omningi kakhulu kunemoto futhi, ngaphezu kwalokho, kufanele ukhokhe umshwalense wayo, intela yayo ezimotweni ezidonsayo, ukuhlolwa kwayo kanye nokuphuka kwayo. Kufanele futhi amtholele igalaji ngoba uma ungekho.
Futhi lokhu kusiholela ekukhulumeni nawe futhi mayelana nokuthi ungapaka kuphi i-motorhome. Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi ayikho imoto engapakwa endaweni eyodwa emigwaqeni yomphakathi isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezimbalwa. Ngakho-ke, noma uyihambisa ngezikhathi ezithile noma ubheka a yokupaka okuyimfihlo kuye, nezindleko zayo ezihambisanayo.
Sengiphetha, sesichazile ungapaka kuphi i-motorhome. Lapho wenza kanjalo, kufanele uhlukanise phakathi kwekamu nendawo yokupaka ukuze kucace. Lokhu kwakamuva ungakwenza ezindaweni ezifanayo njengezinye izimoto. Nokho, ukukhempa kuvunyelwe kuphela ezindaweni zesevisi noma amakamu. Kunoma yikuphi, sikukhuthaza ukuthi uzame i-motorhome, kulula kakhulu ukuthi uyithande.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Ungapaka kuphi i-motorhome
Amadolobha amakhulu eCanada
Amabhishi aseNudist eCosta Brava